XOG: Go’aano ka dhan ah qorshaha Villa Somalia ee Doorashada oo la soo saaray | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Go’aano ka dhan ah qorshaha Villa Somalia ee Doorashada oo la...
XOG: Go’aano ka dhan ah qorshaha Villa Somalia ee Doorashada oo la soo saaray
Midowga Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan gaar ah ku yeeshay Hotelka Jaziira ee Magaalada Muqdisho, kaasi oo looga hadlay Arrimo kala duwan oo qorsheysan.
Kulanka oo ahaa mid Albaabada u xirnaa ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, caqabadaha weli ku hor gudban doorashada ka dhaceysa Soomaaliya iyo kulamadii ugu dambeeyay eek a dhacay Caasimadda.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Musharaxiinta ay mid mid isku xog-wareysteen, isla markaana falanqeyn dheer ka yeeshay khilaafka ka taagan qabasoomida doorashada oo ay ku murasan yihiin Musharaxiinta, maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo Dowladda.
Sidoo kale inta uu socday kulanka Musharaxiinta ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday Go’aankii Xukuumadda ka qaadatay qabashada doorashada, iyagoona xusay in go’aankaas uu yahay mid dhaawici kara midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed.
Musharaxiinta ayaa sheegay in muhiim ay tahay in xal buuxa laga gaaro muranka doorashada ka jira, sidoo kalena caddeeyay in aysan suura-gal aheyn in dalka laga qabto doorasho hal dhinac ah oo ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland,
Wararka ayaa intaas kusii daraya in Midowga ay isla garteen in lasii dardar geliyo kulamada laga yeelanayo xaaladda siyaasadeed gaar ahaan doorashada, waxaana kulankii xalay goobjoog ka ahaa inta badan Musharaxiinta Madaxweynaha.
Habeen horey ayey aheyd markii Musharaxiinta ay kulan la qaateen Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, isla markaana kala hadlay arrimo ku aadan caqabadaha hor taagan doorashada 2021.